के तपाईं सफलताको लागि योग्य हुनुहुन्छ ? जाँच्नुहोस् आफूलाई - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips के तपाईं सफलताको लागि योग्य हुनुहुन्छ ? जाँच्नुहोस् आफूलाई
सपना हरेक व्यक्तिले देख्छ । सफलता हरेक व्यक्तिले चाहन्छ । तर सफलता त्यही व्यक्तिले प्राप्त गर्छ, जसले त्यसको लागि आफूलाई योग्य बनाउँछ ।
यदि तपाईंले कुनै निर्णय गर्दा छोटो समयको फाइदा हेर्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईंले ठूलो सफलता हात पार्न सक्नुहुन्न । निर्णय लिंदा सोंच्नुहोस् कि, त्यो निर्णयले तपाईंलाई आगामी वर्ष हुँदै १० वर्ष पछि कुन स्थानमा पुर्याउन सक्छ ।
पैसालाई बढी महत्व दिने व्यक्तिले सुरुमा त सन्तुष्टि हासिल गर्ला तर ऊ त्यसमै अल्झीरहन्छ । त्यसैले आफ्नो व्यक्तित्व विकासलाई ध्यान दिनुहोस् । पैसालाई भन्दा बढी त्यो कामले तपाईंको जीवनलाई पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुहोस् ।
समयलाई पर्खेर बस्ने व्यक्ति पछाडी रहन्छ । त्यसैले आजलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुहोस् । सम्झनुहोस्, हरेक व्यक्तिसंग दिनमा २४ घण्टा हुन्छ र अगाडी त्यो व्यक्ति मात्र बढ्छ जसले त्यो २४ घण्टाको सदुपयोग गर्न जानेको हुन्छ ।
अरुले धकेलेर अगाडी बढ्ने, या अरुको सहायताले अगाडी हिंड्ने व्यक्ति धेरै टाढा पुग्न सक्दैन । त्यसैले आफ्नो लक्ष्यको आधार आफै निर्माण गर्नुहोस् । अरुले रोपिदिएको रुखको फलमा जीवन नगुजार्नुहोस् , आफ्नो बिरुवाको लागि आफैले बीऊ रोप्नुहोस् र बिरुवा हुर्काउनुहोस् ।
सधै उही स्थानमा रहन मन पराउने र नयाँ कुरा गर्न डराउने व्यक्तिले ठूलो सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्नुहोस्, त्यही अनुसार आफूमा, आफ्नो काममा आवश्यक परिवर्तन ल्याउनुहोस् ।
अरुको ईर्ष्या गर्ने व्यक्ति आफू चाहे अनुसार अगाडी बढ्न सक्दैन । काममा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नुहोस् । काममा अरुलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहोस् । तब तपाईंलाई पनि उनीहरुले अगाडी बढ्न सहयोग गर्नेछन् ।
काम आउँदिन, गर्दिन भन्ने व्यक्तिले आफ्नो सिप र क्षमताको विकास गर्न सक्दैन । त्यसैले कामको लागि आएको प्रस्तावलाई अवसरकोरुपमा लिनुहोस् ।
काम गर्दा आफ्नो काम सक्नुलाई मात्र कर्तव्य मान्ने व्यक्तिले काममा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्दैन । त्यसैले कामको गुणस्तरमा ध्यान दिनुहोस् ।
गल्तीलाई नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिले थप सिक्न सक्दैन । आफूले गरेको होस् या अरुले गरेको होस् गल्तीलाई सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्नुहोस् । त्यो गल्ती के कारणले भयो, के हुनुपर्ने थियो, त्यो गल्तीले कस्तो परिणाम ल्यायो र त्यो गल्ती फेरी हुन नदिनको लागि के गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नुहोस् ।
सबैलाई खुशी बनाउन खोज्ने व्यक्ति सफल हुन सक्दैन । आलोचनासंग नडराउनुहोस् । सबै अरुले चाहे जस्तै गर्नुभयो भने तपाईं तपाईं रहनुहुन्न ।
Previousप्रेरक प्रसङ्ग : गल्ती
Nextडेनस वेटलीका प्रेरक भनाइहरु